Gabdhaha walaalaha ee Sweet Rush - BBC Somali
Gabdhaha walaalaha ee Sweet Rush
9 Nofembar 2010
Image caption Sihaam iyo Imaan Xaashi waa gabdho walaalo ah oo ku heesa afka Ingiriiska.
Siham Haashi oo laba iyo labaatan jir ah iyo Iman Haashi oo labaatan jir ah ayaa ah laba gabdhood oo Somaali ah oo fanaaniin afka Ingriisiga ku heestasa. Waxay ku koreen magaaladda Toronto ee dalka Canada, hase ahaatee, hadda waxay joogaan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka, halkaas oo ay ku duubayaan heesahooda qaar ka mid ah.
Labadan Gabdhood ayaa waxay la shaqeeyaan hay'adda Qaxootiga ee Qaramadda Midoobey, si dadka loogu wacyi galiyo dhibaatada heysata dadka qaxootiga ah. Wariyaha BBCda, Maxamed Xaaji Xusseen ayaa wareystay Sihaam iyo Imaan Xaashi.